Microsoft Word - ithuluzi Ukugunda ngokudala amafayela umbhalo. ongakhetha Uhlelo uvumele kahle futhi ngokuphumelelayo akhiphe amaphepha for olusemthethweni, ibhizinisi noma ezazibhalelwe abantu nje abavamile. Ngezinye izikhathi umhleli imisebenzi ethile ngalesi siyingi kubangele ubuhlungu omnene. Asivume, njengasezulwini "uLizwi" ukususa obomvu ukudwebela umbhalo, cabangela isimo lapho uludinga.
Okwenza IZwi ikhomba ngabanye amazwi mihlobiso imigqa?
Ngo sombhalo, okuzenzakalelayo Microsoft isethwe ukuhlola lupelomagama netimphawu tekubhala. Red uqokomisa izingcezwana equkethe isipelingi amaphutha, oluhlaza - zokuloba. Esakhelwe ngaphakathi Uhlelo isichazamazwi ayikwazi ihlanganise uhla egcwele amazwi ekhona ngesiRashiya (noma iyiphi enye) limi. Ngenxa yalokho, iZwi amagama ngabanye okwalapha ugcizelela imigqa ebomvu, uwabheka ukuba isipelingi eyiphutha. Lokhu kunjalo, ikakhulu amagama kweqiniso futhi amagama lokugcina abantu, amagama amafemu kanye namabhizinisi, amagama professional kanye isitsotsi.
Uma umbhalo ulahlekile amakhoma, abahlukaniswe ubuhlobo syntactic kwamagama, iZwi ngeke ukwaba iziphakamiso ezinjalo tilde oluhlaza. Ezimweni eziningi, lesi sici ewusizo kakhulu, njengoba ikuvumela ukuba ugweme amaphutha nemithetho yolimi nendlela ukushelela ngephutha kulo mqulu elakhiwe. Kodwa zikhona izikhathi lapho akukho okunye kodwa ukususa kudvwebela ebomvu "uLizwi" ukuze anikeze umbono yobuhle umbhalo.
Izinhlobo kwemibhalo lapho kudvwebela multi anemibala okungalungile
Amafayela yomuntu siqu noma ukusebenzisa yangaphakathi yenkampani ala imigqa elikhanyayo kungenziwa indiva. Kodwa cabanga ukuthi lombhalo yakhelwe ukukhombisa esikrinini. Lokhu kungaba uhlu izisebenzi zale nkampani, itafula amagama abafundi esikoleni, umbiko umsebenzi ibhizinisi kanye nezinye izinketho eziningi.
Umuntu kungase kuzwakale kuyindida le engaqaliwe kungani abanye amagama ladvwetjelwe abomvu. Noma, ngokwesibonelo, wadala idokhumenti umbhalo kuhlelelwe ukwenza skrini eminye faka izithombe ku isethulo, sibekwe kusayithi nge e-mail noma lokuposa. Ngakho-ke, umbuzo kanjani ukususa kudvwebela ebomvu, "uLizwi," akukhona lutho, ezidinga izixazululo ngokushesha.
Lahla imigqa okungenasidingo okumbalwa
Cabangela izindlela ezimbalwa ukususa kudvwebela ebomvu "uLizwi" ngoba idokhumenti olulodwa.
Chofoza igama chofoza kwesokudla evelayo, khetha "Yeqa" noma "Yeqa zonke". Esimweni sokuqala, lo ukudwebela ubalekela kuphela ngaphansi izwi elilodwa, okwesibili - wonke umbhalo zizosulwa emgqeni. Lolu khetho akulona othembeke kunabo bonke, ngoba ngesikhathi esizayo uma uvula dash ifayela mihlobiso kungaba ivele.
Thola ladvwetjelwe izwi imenyu bese ukhetha "Faka kwisichazamazwi". Manje nanoma yimiphi imibhalo umbhalo wadala kukhompyutha yakho, izwi kuzoxoxwa ebhaliwe kahle. Nokho, lapho beshintsha kuvalwe icala eZwini yayo izwi futhi ukwaba eqaphela iphutha.
Esikhathini ekhoneni elingenhla esinxeleni umhleli umbhalo evulekile, chofoza inkinobho "Ifayela", bese uthi "Izinketho", bese uthi "isipelingi". Lapha, ungakhethi umugqa "Hlola isipelingi".
Kulokhu, isivivinyo ukwazi ukufunda nokubhala ngeke kwenziwe ngazo zonke imibhalo, izinkinga ababa nazo kanjani ukususa kudvwebela ebomvu, "uLizwi," ayisekho khona. Ngo-Microsoft Word version 2010 nangaphezulu kungenzeka ukukhubaza ukuskena zenguqulo yamanje kombhalo.
Ukuze ifayela wavulwa ngendlela efanayo kwamanye ama-PC noma laptops, qiniseka ukuthi ufaka isivikelo kwemaphutsa. Ukuze wenze lokhu, kwimenyu enkulu e-Microsoft Office 2003 noma 2007, khetha "Lungisa", bese "UMarku idokhumenti njengoba yokugcina", eZwini 2010, chofoza uphawu nge ukhiye futhi uhlole ukukhetha ufuna Ukuvikelwa.
Yekuchumana sendlela ukufaka PDF ku-PDF
Imiyalelo elula sendlela ukuvula ifayela iso
Indlela ukususa yokugcwalisa e "uLizwi" zokuguqulwa ezahlukene
Umthuthukisi "Urban Iqembu": ukubuyekezwa. "Urban Iqembu": izinganekwane ngokoqobo
I ikhambi nail ukhunta ngezinyawo zakho ekhaya ngosizo izidakamizwa?
25 izinto okudingeka uyenze ngesikhathi uneminyaka engaphansi 25